Fomba dimy an'ny orinasa martech milalao lalao lava omena tombony 28% amin'ny fandaniana amin'ny varotra | Martech Zone
Ny areti-mifindra Coronavirus dia tonga niaraka tamin'ny fanamby sy fianarana avy amin'ny fiarahamonina, ny tena manokana ary ny fomba fiasa. Sarotra ny mitazona ny fitomboan'ny orinasa vaovao noho ny tsy fahazoana antoka ara-toekarena sy ny varotra mangatsiaka.
Ary izao dia manantena ny mety hisy i Forrester 28% ny fihenan'ny vidin'ny marketing mandritra ny roa taona ho avy, ny sasany amin'ireo orinasan-tsolika 8,000+ dia mety ho (tsy mahomby) mihazakazaka misedra tena be loatra amin'ny fanomanana.
Na izany aza, ny zavatra inoako dia hitazona ny orinasa martech hitombo mandritra ny sisa tavela amin'ity areti-mandringana ity - ary fomba fanao tsara mandritra ny fotoana maharitra ihany koa - dia ny hampihena avo roa heny ny tanjaka, ny fitaovana ary ny fananana efa misy.
Ireto misy hevitra dimy hitehirizana ny enti-manana sy hitazomana ny fotoana hampiasana izay efa anananao:
Esory ny fihemorana sy ny korontana: Fantsiho ny atinao anatiny Marie Kondo, ary miverena amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao hatrizay. Farany tadiavo ireo zavatra tsy dia maika loatra izay nopotsirina nandritra ny volana maro, angamba taona maro, fa afaka mitondra ny famokarana mandritra ny fotoana fohy sy maharitra kokoa. Ny orinasanay dia nanomboka tamin'ny fomba metodaly backlog singa amin'ny asa fivarotana, famatsiam-bola, fahombiazan'ny mpanjifa, ary faritra hafa mahatonga antsika hahomby kokoa, ary hanokatra ny fahafaha-manao fitomboana aza.
Angamba ianao manana fanatsarana fotodrafitrasa fototra izay tianao hamboarina amin'ny teknolojia misy anao. Ampiasao ity fotoana ity hiresahana ireo laharam-pahamehana kely kokoa ary hanatsara ny orinasanao na ny vokatrao rehefa manomboka miverina indray ny varotra.
Ahenao ny sasany amin'ny anao trosa fandaminana: Toy ny amin'ny fampandrosoana teknolojia rehefa trosa ara-teknika isika, amin'ny fikambanana dia miteraka trosa fandaminana. Araraoty ity fotoana ity hanoritana ny endriny sy hanatsara ny fizotranao, hanadio ary hampitambatra ny angon-drakitrao mba hahitanao tsara kokoa ny mpanjifanao, ny vokatrao ary ny orinasanao manontolo. Ny famerenana amin'ny laoniny rehefa miova ny fizotrany na ny enti-manana dia mamela anao hanana fomba fanavaozana ravina madio amin'ny fizotry ny asanao lehibe. Ohatra, ny ekipanay vao haingana no nampiasa ny anay sehatra data ho an'ny mpanjifa (CDP) handrindrana, hanafoanana ary hanadio ny angon-drakitra rehetra momba ny varotra sy ny varotra manerana ny silo, mba hahafahanay mihazakazaka mifandraika bebe kokoa sy any amin'ny ROI tsara kokoa.
Fantaro ny teknolojia misy anao: Aorian'ny fampiasam-bola ampahany tsara amin'ny tetibola ho any amin'ny vahaolana ara-teknolojia mety amin'ny varotra, varotra, IT, sy ny maro hafa, ny fitakiana sy ny teritery hafa dia mety nametra ny ekipanao tsy hampiasa tanteraka ireo sehatra andoavanao vola. Avy amin'ny Slack mankany amin'ny rafi-pifidianana CRM an'ny orinasanao, ampiasao ity fihenam-bidy ity ho lasa manam-pahaizana amin'ireo fitaovana manan-danja ao amin'ny kitanao, na mampalalino fahalalana amin'ny fitaovana tsy dia fantatra loatra. Na ny orinasa toa an'i Marketo sy Microsoft aza mahita an'io fotoana io ary fanaovana fiofanana mandroso ho an'ny vokatra azo maimaim-poana.
Mifantoha amin'ireo mpanjifa efa misy: Mety ho miadana ny varotra ary voafetra ny fotoana fivarotana mivantana mifanatrika mandritra ny areti-mandringana (raha tsy hiteny afa-tsy izay); saingy, tsy midika izany fa voafatotra ny tananao. Rehefa manararaotra betsaka ny zavatra efa ananan'izy ireo ny orinasa dia tafiditra ao anatin'izany ny mpanjifa efa misy. Misafosafo amin'ny varotra, marketing, fahombiazan'ny mpanjifa, ary ny hafa mba hahitana fomba famoronana hitomboana fifandraisana na hampitomboana ny tsy fivadihana manerana ny tobin'ny mpanjifanao. Ny ekipanay dia nanomboka namorona sy nizara andiana horonan-tsary fampianarana hanampiana ny mpanjifa hahazo aina kokoa sy liana amin'ny fampiasana ireo endri-javatra vaovao amin'ny sehatray.
Avereno avo roa heny ny fanavaozana: Nanakarama ny tsara indrindra indrindra ianao ary mamokatra izay heverinao ho tsara indrindra. Saingy, mety ho ny mpiasao, raha omena fotoana manavao, afaka manatsara ny vokatra sy ny fizotrany? Mandritra ny fotoana fihenam-bidy, ataovy lohalaharana amin'ny orinasa ny mampiasa vola amin'ny fanavaozana. Mandrosoa ny hackathon manerana ny orinasa na ny fifaninanana am-pirahalahiana izay manome fotoana ny mpiasa handinika, hanandramana ary hamorona vahaolana vaovao. Vao tsy ela akory izay ny orinasanay dia nanao an'io ary nahita fa miaraka amina hacks vitsivitsy, ny vokatray dia mety hanjary ho mahasoa kokoa ho an'ny ekipa anatiny, ary ho an'ny mpanjifantsika koa.
Na inona na inona filalaovana ny roa taona manaraka, mino aho fa nampahatsiahy antsika ity areti-mandringana ity - na ny mpitondra orinasa na ny mpiasa - fa rehefa misy ny fanamby dia misy koa ny fotoana mety. Ny manome toerana an'ireo fotoana ahafahana mamony dia kolontsain'ny orinasa mitaona ny fahalalahana, ny famoronana ary ny fitomboana. Tokony hamporisihina ny mpiasa hanandrana zava-baovao ary avy eo ankalazaina noho ny fahaiza-mamorona sy ny vahaolana.
Na inona na inona fanapahan-kevitry ny orinasanao martech hanararaotra ny ankamaroan'ny zavatra ananany - ny fifantohana amin'ny vokatrao, fitaovana, olona na mpanjifanao - ny tanjona farany dia ny hanome aingam-panahy, na dia amin'ny fotoan-tsarotra aza.
Tags: cdpfanamboarana ravina madiofifaninananaCRMfampandrosoanahackathonfoto-drafitr'asazava-baovaobacklog marketingfandaniana amin'ny marketingmarketoMartechmpivarotra martechMicrosofttrosa fandaminanateknolojia